बलात्कारीलाई कडा दण्ड देऊ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बलात्कारीलाई कडा दण्ड देऊ
२०७४ चैत्र १६, शुक्रबार ११:३८ गते
नेपालमा नियमित श्रृंखलाजस्तै बलात्कारका घटना बढिरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने समाचारमा बलात्कारका घटना अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको छ । यसले नेपाली समाजलाई प्रतिबिम्बित मात्र गर्दैन, राज्य प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । बालिका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपश्चात् हत्याजस्ता मानव सभ्यतामाथि नै कलंक लाग्ने यस्ता घटना बढ्नु विडम्बनाको विषय हो । नेपालका दुर्गम गाउँबस्तीदेखि राजधानीको बजारसम्म बलात्कारका घटना बढिरहेका पाइन्छन् । दिनहुँजसो भइरहेका यस्ता घटना एकपछि अर्को गरी डरलाग्दो रुपमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यस्तो अक्षम्य अपराधमा कडा दण्डको व्यवस्था नहुँदा घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । बलात्कारजस्तो निकृष्ट अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने, मिलोमतोमा अभियुक्तलाई छुटकारा दिने, शक्तिको आडमा मुद्दा कमजोर बनाएर पीडकलाई छूट दिइने प्रवृत्ति छ । बलात्कारजस्तो फौजदारी अपराधको मुद्दा नारीवादी अभियन्ताले मात्रै उठाउनु पर्ने विषय होइन । यो गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रुपमा खडा भइसकेको मुद्दा भएकाले अब यसविरूद्ध सिंगो समाज नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
पछिल्लो समय बलात्कारको अपराधबाट अछूतो रहेको कुनै वर्ग र क्षेत्र बाँकी छैन । जन्म दिने पितादेखि शिक्षा दिने गुरू, आश्रय दिने दाता, अभियन्ता, रक्षक सबैबाट बालबालिका असुरक्षित हुने गरेका दृष्टान्तहरु अखबारमा खबर बनिसकेका छन् । धार्मिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा अपराध मौलाउँदै गएका छन् । प्रायः बलात्कारका घटनामा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अपराधीलाई छुटाउने प्रवृत्ति छ । यसका पछाडि शक्ति र अर्थको प्रभाव नै मुख्य रहेको पाइन्छ । अहिले पैसा खर्च गर्न नसक्ने र बोल्न नसक्ने पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको स्थिति छ । बलात्कार एक अमानवीय र सिंगो मानवजातिका लागि लज्जास्पद कुकर्म हो । यस्ता कुकर्म गर्ने जोसुकै होऊन्, कडा कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ । तर विडम्बना ! शक्तिको आडमा यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता अभियुक्तहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । बलात्कारका घटना किन बढिरहेका छन् ? यो सवाल राज्य प्रशासनले निरुपण गर्नुपर्ने विषय हो । तर, राज्यले सामाजिक र सांस्कृतिक कारणहरूको खोजी गरेर त्यसको निरुपण गर्न अग्रसरता देखाएको छैन ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा पारिवारिक सम्बन्ध भएका, नजिकका आफन्त, साथीभाइ र भरोसा गरेका व्यक्ति नै बढी संलग्न देखिएका छन् । समाजमा विश्वासको कतिसम्म संकट रहेछ भन्ने उदाहरण हो यो । बलात्कारको शिकार हुने अधिकांश १६ वर्षमुनिका बालिका र प्रौढ रहेको पाइन्छ । शारीरिक रुपमा कमजोर भएका नै पीडकको पहिलो निसानामा पर्ने गरेका विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्छन् । बलात्कारजस्तो घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउनु भनेको अपराधले प्रश्रय पाउनु हो । बलात्कारका घटनाको श्रृंखला बढेपछि प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार सांसद्हरुले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरे । पछिल्लो समय बलात्कारीलाई फाँसी दिइनुपर्ने माग पनि सर्वत्र उठ्न थालेको छ । नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरेको छैन । तथापि, बालिका बलात्कारजस्तो गम्भीर घटनाका दोषीलाई न्यूनतम आजीवन कारावासको सजाय हुनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कठोर दण्ड सजायबिना बलात्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थामा संंशोधन गरी कडा कारबाहीको प्रावधान राखिनु जरूरी देखिएको छ ।